Dagaalkii Qoriga Ee Farmaajo Iyo Mucaaradka Miyuu Soo Dhowyahay? | Xaqiiqonews
WARKA:Todobaadkan Midowga Musharixiinta ayaa soo saaray digniin ku aadan habsami u socodka doorashada oo ay ku sheegeen mid u muuqata “boob”.
DHAMMAADKIISA: Qoraalkii ugu dambeeyey ee midowga musharixiinta ay kaga hadleen “boobka doorashooyin” waxaa dhici karta in uu noqdo mid horudhac u ah nooc cusub oo hardan ah oo markale uu dalka lugaha la galo.
Lahjadda qoraalka ayaa ka muhiimsaneyd qoraalka laftiisa, waxa ayna si cad u sheegeen in aysan “aqbali doonin” waxa ay ku sifeeyeen “boob qaawan”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah tiirarka uu ka taagan yahay midowga ayaa boggiiisa faysbuugga ku qoray faafaahin ku aadan nooca go’aan ee midowga qaatay.
Cabdishakuur ayaa waxa socda ku soo koobay labadan kalmadood “ama i doorta ama doorasha la’aan”.
Qeylo dhaanta “boobka doorashada” ma ahan mid ku kooban oo kaliya midowga, sidoo kale waxaa jira mas’uuliyiin caan ah oo aan mucaaradka ka mid aheyn kuwaasi oo sheegay in loo diiday xitaa ka qeyb galka doorashada.
Dadka waxa socda boob ku tilmaamay waxaa ka mid ah Jawaari oo loo diiday in uu isku soo sharxo xilka uu isaga ku fadhiyey 4-tii sano ee la soo dhaafay.
Qoraalka midowga waxaa ku jiray “waxa aan sameyneynaa wada tashiyo ku aadan masiir dalka”, arintaasi oo dadku u fasirteen siyaabo kala duwan.
Fariinta midowga oo lagu soo koobay wax ka yar “100 eray” ayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee laga fahmi karo waxaa ka mid ahaa in dagaalkii hore uu ahaa qabyo lana dhameystiri doono hadii lagama maarmaan ay noqoto
Ka badbadis ma ahan laakiin qoraalkii midowga waxa uu dhagaha shacabka kaga tagay su’aal muhiim ah : Ma doorasho ayaa dhici doonto mise dagaal?
Ma hubo in dalka uu aadi doono “doorashooyin” ama uu aadi doono “dagaal” hase ahaatee hal arin aan hubo waxa uu yahay dagaalka ma ahan “qasab” waa xulasho ku xirnaan doono hadba nooca go’aan ee ay qaataan labada dhinac.